Tababare Valverde oo ka hadlay xaalada xidigaha Messi iyo Umtiti, kahor kulanka Valladolid – Gool FM
Tababare Valverde oo ka hadlay xaalada xidigaha Messi iyo Umtiti, kahor kulanka Valladolid
Dajiye February 14, 2019
(Real Madrid) 14 Feb 2019. Tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa ka hadlay go’aankiisa kaga aadan halyeeyga reer Argantina ee Lionel Messi ka qeyb galkiisa kulanka Sabtida soo aadan ay kula ciyaari doonaan kooxda Real Valladolid horyaalka La Liga,
Wararka ka imaanaya gudaha dalka Spain ayaa waxy sheegayaan inuu jiro shaki ku aadan in Messi uu ka maqnaanayo kulanka soo aadan ee Real Valladolid.
Valverde ayaa kahor kulankan wareysi uu bixiyay waxaa soo xigtay wargeyka “Mundo Deportivo” ee dalka Spain waxyaabihii uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaalada Messi.
“Messi ma ciyaari doono kulan kasta, isagoo dhaawacan, balse haatan xaaladiisa jir ahaaneed aad ayay u fiican tahay”.
“Lio si fiican ayuu tababarka u sameeyay, mana jirno sabab macquul ah uu ku seegi karo kulamada soo socoda ay ciyaari doonto kooxda Barcelona”.
“Xaalada Samuel Umtiti way ka duwan tahay tan Messi, waxaan rajo wanaagsan ka qabnaa inaan aragno Umtit waqtiga ugu dhow ee ugu macquulsan, mana dhihi karo wuxuu ciyaari doonaa kulanka Sabtida ama Talaadada”.
Waxaa xusid mudan in kooxda Barcelona ay isku diyaarineyso kulanka ay Sabtida soo aadan kula ciyaari doonto horyaalka La Liga kooxda Real Valladolid garoonkeeda Cump Nou, kaasoo ka tirsan kulamada 24-aad ee xili ciyaareedkan.
RASMI: Sergio Ramos oo Baaritaano lagu bilaabay iyo Laacibka oo Ganaax wajihi kara